१३५६ संक्रमित थपिए, थप २ जनाको मृत्यु – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार १६:२३ English
काठमाडौँ । विगत २४ घण्टामा देशभर एक हजार ३५६ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आज ११ हजार १५४ जनाको पिसीआर परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । योसंगै अहिलेसम्म ६६ हजार ६३२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ ।
यस्तै विगत २४ घण्टामा ८२३ जना सङ्क्रमणमुक्त भई घर फर्किएका छन् । अहिलेसम्म ४८ हजार ६१ जना सङ्क्रमित निको भई घर फर्किसकेका छन् । यस्तै देशभर सक्रिय सङ्क्रमित १८ हजार १४२ जना रहेका छन् भने क्वारन्टिनमा सात हजार १७१ जना रहेका छन् ।
त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४२९ पुगेको छ ।
उपत्यकामा थपिए ६४७ कोरोना संकमित
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौ उपत्यकामा थप ६४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौमा ५११, ललितपुरमा ७३ र भक्तपुरमा ६३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट उपत्यकामा थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमणबाट काठमाडौंका ५० बर्षिय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जनाएको छ ।
६ आश्विन २०७७, मंगलवार १७:३७ मा प्रकाशित